एनआरएनए कोषाध्यक्ष उम्मेदवार महेश श्रेष्ठको जीत सुनिश्चित, बने कांग्रेस र नेकपाको आधिकारीक साझा उम्मेदवार - NRN Khabar
कांग्रेस महाधिवेशनमा कुल आचार्य डा. शेखर कोइरालालाई जिताउन लागेको खुलासा... December 15, 2021
ग्लोबल गोरखा समाजका संरक्षक राम प्रताप थापा एनआरएनए कार्यबाहक प्रमुख निर्वाचन आय... December 11, 2021
एनआरएनए कोषाध्यक्ष उम्मेदवार महेश श्रेष्ठको जीत सुनिश्चित, बने कांग्रेस र नेकपाको आधिकारीक साझा उम्मेदवार
काठमाडौं : गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) कोषाध्यक्ष उम्मेदवार महेश श्रेष्ठ नेकपा र कांग्रेसको साझा उम्मेदवार बनेपछि जीत सुनिश्चित बनेको छ । श्रेष्ठलाई नेकपा र कांग्रेस दुवै पार्टीले समर्थन जनाउँदै संयुक्त रुपमा साझा उम्मेदवार बनाउने भएपछि श्रेष्ठको जीत सुनिश्चत बनेको हो ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र कांग्रेसको समर्थन पाएपछि श्रेष्ठको जीत सुनिश्चित देखिएपछि श्रेष्ठलाई बधाई दिनेको ओइरो लागेको छ ।
विशेष गरि श्रेष्ठलाई कुनै टिमको भन्दा साझा उम्मेदवारको रुपमा खडा गर्दै जाँदा यस पटक एनआरएनएले कोषाध्यक्षमा सक्षम र योग्य ब्यक्ती पाउने भएको छ ।
संस्थामा आइपर्ने जस्तोसुकै चुनौती र आर्थिक संकटलाई सामाना गर्ने क्षमता राख्नुहुने श्रेष्ठको जीत एनआरएनए संस्थाको लागि महत्वपूर्ण रहेको देखिन्छ । किनकी कोषाध्यक्ष उम्मेदवारमध्ये सबैभन्दा सक्षम, सालीन, इमानदार र राम्रो छवी श्रेष्ठको रहेको पाइन्छ ।
कम बोल्ने स्वभावको श्रेष्ठ काममा विश्वास गर्ने भएकै कारण सबैको रोजाईमा पर्नुभएको हो । त्यसैले श्रेष्ठलाई जिताउने मात्र नभई दुई तिहाई भन्दा बढी बहुमतले जिताउनु सबै प्रतिनिधिको कर्तब्य हुन आएको देखिन्छ ।
श्रेष्ठले संस्थालाई अगाडि बढाउन चार मन्त्र प्रस्तुत गर्नुभएको छ । श्रेष्ठले संस्थामा पारदर्शीता, इमानदारीता, मितब्ययिता र ठोस कार्ययोजनाु मन्त्र अगाडि सार्नुभएको हो ।
Related tags : एनआरएनए कोषाध्यक्ष उम्मेदवार महेश श्रेष्ठको जीत सुनिश्चित बने कांग्रेस र नेकपाको आधिकारीक साझा उम्मेदवार
एनआरएनए एसिया प्याशिफिक क्षेत्रीय संयोजकमा मेरो जीत सुनिश्चित छ: रोविन्द श्रेष्ठ (गोविन्द)
एनआरएनए सचिव उम्मेदवार विनय अधिकारीलाई जिताउन सक्दो सहयोग गर्ने नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समितिको निर्णय
कांग्रेस महाधिवेशनमा कुल आचार्य डा. शेखर कोइरालालाई जिताउन लागेको खुलासा
ग्लोबल गोरखा समाजका संरक्षक राम प्रताप थापा एनआरएनए कार्यबाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा नियुक्त